China Factory Supplier PP Yakarukwa Bag Multifunctional yakarukwa bhegi
Kambani yedu inonamatira kune yakakosha musimboti we "Hunhu hunogona kunge huri hupenyu hwesangano rako, uye zita rinogona kunge riri mweya waro" PP Yakarukwa Bag, Hunhu hupenyu hwefekitori, Tarisa pane zvinodiwa nevatengi ndiko kunobva kupona kwekambani nekusimudzira. , Tinonamatira kutendeseka uye kutenda kwakanaka kwekushanda maitiro, tichitarisira kuuya kwako!
New Arrival China China Packaging Bag, Chikafu Bag, Hatizongoenderera mberi tichiunza hutungamiri hwehunyanzvi hwenyanzvi kubva kumba nekune dzimwe nyika, asi zvakare kugadzira zvigadzirwa zvitsva uye zvepamberi nguva dzose kuti zvizadzise zvinogutsa zvinodiwa nevatengi vedu pasi rese.
Kambani yedu inonamatira kune yakakosha musimboti we "Hunhu hunogona kuve hupenyu hwesangano rako, uye zita rinogona kunge riri mweya waro" PP Yakarukwa Bag, Hunhu hupenyu hwefekitori, Tarisa pane zvinodiwa nevatengi ndiko kunobva kupona kwekambani nekusimudzira. , Tinonamatira kutendeseka uye kutenda kwakanaka kwekushanda maitiro, tichitarisira kuuya kwako!
1. Kurongedzerwa kwezvokudya: Mumakore achangopfuura, mabhegi akarukwa zvishoma nezvishoma ave achishandiswa pakurongedzerwa zvokudya zvakadai somupunga noupfu. Mabhegi akarukwa akajairika ndeaya: masaga akarukwa mupunga, masaga akarukwa eupfu nemamwe masaga akarukwa.
2. Kurongedza zvigadzirwa zvekurima semuriwo, uyezve kutsiva mapepa esimende ekurongedza mabhegi.
Ikozvino, nekuda kwezviwanikwa zvechigadzirwa uye nyaya dzemitengo, nyika yangu ine mabhiriyoni matanhatu emabhegi akarukwa epurasitiki anoshandiswa kurongedza simende gore rega rega, achiverengera anopfuura makumi masere neshanu muzana ezvizhinji zvekurongedza simende. Kutevera kuvandudzwa uye kushandiswa kwemasaga emidziyo anochinjika, mabhegi epurasitiki akarukwa anoshandiswa zvakanyanya mumakungwa, zvekufambisa, uye kutakura zvigadzirwa zvekurima. Mukurongedzerwa kwezvigadzirwa zvekurima, iko zvino zvave kushandiswa zvakanyanya mukurongedza zvigadzirwa zvemumvura, huku yekudya kurongedza, zvekuvhara zvemapurazi, uye zvirimwa. Rima zvinhu zvakaita semumvuri, mhepo nechimvuramabwe. Zvigadzirwa zvakajairika: kudyisa mabhegi akarukwa, mabhegi akarukwa emakemikari, mabhegi emuriwo mesh, mabhegi emichero mesh.
3. Zvifambiso zvevashanyi: Matende enguva pfupi, parasols, mabhegi ekufambisa akasiyana-siyana, uye mabhegi ekufambisa mubasa rekufamba zvose zvinogadzirwa nemachira epurasitiki akarukwa. Mhando dzese dzemateru dzinoshandiswa zvakanyanya sechivharo chekutakura uye chekuchengetedza, pachinzvimbo chekotoni tarpaulins, idzo dzinowanzoita stale uye clunky. Fenzi nemambure mukuvaka anoshandiswawo zvakanyanya mumachira akarukwa epurasitiki. Zvakajairika ndezvi: mabhegi ekutakura zvinhu, mabhegi ekurongedza, mabhegi ekutakura zvinhu, mabhegi ekurongedza, nezvimwe.
1. Kuruka density kushivirira.
Iyo braid density tolerance inoreva huwandu hweshinda dzakapfava kupfuura yakapihwa standard braid density kana kuderedzwa.
2. Huremu pachikamu chechikamu chejira rakarukwa.
Huremu pachikamu chechikamu chejira rakarukwa rinoratidzwa mumamita mita, inova yakakosha tekinoroji chiratidzo chemucheka wakarukwa. Huremu hwemamita huremu zvakanyanya hunoenderana newap uye weft density uye ukobvu hweshinda yakati sandara. Huremu hwemamita huremu hunokanganisa kusimba kwekusimba uye kutakura mutoro wejira rakarukwa. Huremu hwemamita huremu ndicho chinongedzo chikuru mukudzora mutengo webhizinesi rekugadzira.
3. Yakarukwa jira tensile mutoro.
Tensile load inonziwo tensile simba, tensile simba. Pajira rakarukwa, rinotakura kusimba mumativi ese ewap uye weft, saka inodaidzwa kunzi warp uye weft tensile load.
Zvakapfuura: China PP Polypropylene Yakarukwa Saga Bag Pack mafashama-uchapupu akarukwa masaga
Zvinotevera: Fekitari yakaita inopisa-kutengesa China Wholesale 100% PP Multifunctional yakarukwa bhegi
Degradable Polypropylene Woven Bag
Kudzora Mafashama Yakarukwa Bag
Hombe Packaging Yakarukwa Bag
Packaging Logistics Yakarukwa Bag
Mabhegi Akarukwa Ezvekurima Zvekutakura
Vagadziri vakananga PP yakarukwa bhegi Logistics pac...
Mvura Inopindira uye Inofema Weeding Mucheka, Biodegradable Weed Control Fabric, Kusakura Mumucheka, Heavy Duty Weed Barrier, Weed Control Fabric Roll, Pp Woven,